FS2004 mma - Rikoooo
Regina Intl Airport CYQR FS2004 -ekpo ọkụ
Ebe a bụ nkọwa zuru ezu na mba ọdụ nke Regina (CYQR) isi-obodo nke Province of Saskatchewa na Canada. A mma bụ nanị maka FS2004 / FS9. The ebe ndị mara mma na-agụnye elu-mkpebi 3D ụlọ, photo-ata textures, abalị na n'oge a kara textures, ọkụ, na mpaghara okporo ụzọ (lee Traffic DOC) ... GỤKWUO
Sardinia Complete Photorealistic Pack FS2004 -ekpo ọkụ
A mara mma foto-ezi uche ebe ndị mara mma na-ekpuchi dum nke Sardinia, ọ bụghị gụnyere àgwàetiti ndị ntakịrị. N'agbanyeghị nnukwu size nke ebe ndị mara mma, eku ọnụego bụ nnọọ enyi na enyi na FS2004, nke pụtara na simulator gaghị slowing down.Includes zuru ntupu nke Sardinia, ndị autogen maka obodo li ... GỤKWUO
Project Real Aleppo Airport FS2004 -ekpo ọkụ
The Aleppo International Airport bụ ụgbọelu dị na Aleppo, Siria. Ọ nwere ike nke 1.5 nde njem kwa afọ. Nke a bụ nke abụọ n'elu ikpo okwu kenha onye Siria Arab Airlines mgbe ahụ si Damascus International Airport.Aleppo nwere airfield na nke mbụ ọkara nke iri abụọ OA ... GỤKWUO
.SAP Christian diblateyim Sarah, Vedat Sencan